Nkwupụta amụma nzuzo - LinuxCapable
Kedu ụdị kuki anyị na-eji?
Kuki na-arụ ọrụ
Kuki mgbasa ozi ọha
Kedu otu esi eji kuki maka ebumnuche mgbasa ozi?
Otu esi ehichapụ kuki?
Mgbanwe na Mmezi
Nnabata nke amụma
Amụma nzuzo a ("Iwu") na-akọwa ihe kuki bụ na otu na ha na-eji linuxcapable.com website ("Webụsaịtị" ma ọ bụ "Ọrụ") yana ngwaahịa na ọrụ ọ bụla metụtara ya (mkpokọta, "Ọrụ").
Amụma a bụ nkwekọrịta iwu kwadoro n'etiti gị ("Onye ọrụ," "gị," ma ọ bụ "nke gị") na onye ọrụ webụsaịtị a ("Onye ọrụ," "anyị," "anyị," ma ọ bụ "anyị")). Were ya na ị na-abanye na nkwekọrịta a n'aha azụmahịa ma ọ bụ ụlọ ọrụ iwu kwadoro. N'okwu ahụ, ị ​​na-anọchite anya na ị nwere ikike ijikọ ụdị ọrụ a na nkwekọrịta a, nke ikpe a "Onye ọrụ," "gị," ma ọ bụ "nke gị" ga-ezo aka n'ụdị ahụ. Ọ bụrụ na ịnweghị ikike dị otú ahụ ma ọ bụ kwenye na usoro nke nkwekọrịta a, ị gaghị anabata nkwekọrịta a ma ghara ịnweta ma jiri weebụsaịtị na Ọrụ.
Ọ ga-akacha mma ma ọ bụrụ na ịgụọ Iwu a iji ghọta ụdị kuki anyị na-eji, ozi anyị na-anakọta site na iji kuki, yana otu esi eji ozi ahụ. Ọ na-akọwakwa nhọrọ dịịrị gị gbasara ịnakwere ma ọ bụ jụ iji kuki.
Kuki bụ obere iberibe data echekwara na faịlụ ederede echekwara na kọmputa gị ma ọ bụ ngwaọrụ ndị ọzọ mgbe a na-ebunye weebụsaịtị na ihe nchọgharị. A na-eji ha nke ukwuu icheta gị na mmasị gị, ma ọ bụ maka otu nleta (site na “kuki nnọkọ”) ma ọ bụ maka ọtụtụ nleta ugboro ugboro (iji "kuki na-adịgide adịgide").
Kuki oge bụ kuki nwa oge a na-eji n'oge nleta gị na webụsaịtị, ha na-ekubi ume mgbe imechi ihe nchọgharị weebụ.
A na-eji kuki ndị na-adịgide adịgide icheta mmasị gị n'ime weebụsaịtị anyị ma nọrọ na desktọọpụ gị ma ọ bụ ngwaọrụ mkpanaka ọbụlagodi mgbe ị mechiri ihe nchọgharị gị ma ọ bụ malitegharịa kọmputa gị. Ha na-ahụ maka ahụmịhe na-agbanwe agbanwe na nke ọma maka gị mgbe ị na-eleta weebụsaịtị na Ọrụ.
Weebụsaịtị nwere ike ịtọ kuki ("kuki ndị otu mbụ") ma ọ bụ ndị ọzọ, dị ka ndị na-eje ozi ọdịnaya ma ọ bụ na-enye mgbasa ozi ma ọ bụ ọrụ nyocha na weebụsaịtị ("kuki ndị ọzọ"). Ndị ọzọ a nwere ike ịmata gị mgbe ị gara na webụsaịtị anyị yana mgbe ị gara na webụsaịtị ndị ọzọ.
pịa ebe a ịmụtakwu banyere kuki na otu ha si arụ ọrụ.
Kuki ndị dị mkpa na-enye anyị ohere ịnye gị ahụmịhe kachasị mma mgbe ị na-abanye ma na-agagharị na weebụsaịtị anyị ma jiri atụmatụ ya. Dịka ọmụmaatụ, kuki ndị a ka anyị mara na ịmepụtara akaụntụ ma banye n'ime akaụntụ ahụ iji nweta ọdịnaya ahụ.
Kuki arụ ọrụ ka anyị rụọ ọrụ weebụsaịtị na Ọrụ dịka nhọrọ ị mere. Iji maa atụ, anyị ga-amata aha njirimara gị wee cheta otu ị si hazie weebụsaịtị na Ọrụ n'oge nleta n'ọdịnihu.
Kuki ndị a na-enyere anyị na ọrụ ndị ọzọ aka ịnakọta data ekpokọtara ọnụ maka ebumnuche ndekọ maka otu ndị ọbịa anyị si eji Weebụ. Kuki ndị a enweghị ozi nkeonwe dịka aha na adreesị ozi-e ma ejiri ya nyere anyị aka melite ahụmịhe onye ọrụ nke weebụsaịtị.
Kuki ndị ọzọ sitere na saịtị mgbasa ozi ọha (dị ka Facebook, Twitter, wdg) ka anyị soro ndị ọrụ netwọk mmekọrịta mgbe ha gara ma ọ bụ jiri webụsaịtị na Ọrụ ma ọ bụ kesaa ọdịnaya site na iji usoro mkpado nke netwọk mmekọrịta ndị ahụ nyere.
A na-ejikwa kuki ndị a maka ebuso ihe omume na ebugharị ebumnuche. A ga-eji data ọ bụla anakọtara na mkpado ndị a dabere na iwu nzuzo nke anyị na netwọkụ mmekọrịta. Anyị agaghị anakọta ma ọ bụ kesaa ozi ọ bụla nke njirimara nke onye ọrụ.
Kuki na teknụzụ mgbasa ozi dị ka mgbama webụ, pikselụ na mkpado netwọkụ mgbasa ozi na-amaghị aha na-enyere anyị aka ijere gị mgbasa ozi dabara adaba nke ọma. Ha na-enyekwara anyị aka ịnakọta data nyocha, nyocha na mkpesa arụmọrụ maka ndị mgbasa ozi. Pixels na-enyere anyị aka ịghọta na melite nnyefe nke mgbasa ozi nye gị ma mara mgbe egosiri gị ụfọdụ mgbasa ozi. Ebe ihe nchọgharị weebụ gị nwere ike ịrịọ mgbasa ozi na mgbama weebụ ozugbo site na sava netwọkụ mgbasa ozi, netwọk ndị a nwere ike ịlele, dezie, ma ọ bụ tọọ kuki nke ha, dịka a ga-asị na ị rịọrọ ibe weebụ na saịtị ha.
Agbanyeghị na anyị anaghị eji kuki mepụta profaịlụ nke omume nchọgharị gị na saịtị ndị ọzọ, anyị na-eji mkpokọta data sitere na ndị ọzọ iji gosi gị mgbasa ozi dabara na mmasị. Anyị anaghị enye ndị mgbasa ozi ozi nkeonwe anyị na-anakọta. Ị nwere ike ịpụ apụ na saịtị na mgbasa ozi nke ndị ọzọ site na imezi ntọala kuki gị. Mwepụ agaghị ewepụ mgbasa ozi na ibe ndị ị gara, mana, kama, ịpụ a ga-eme ka mgbasa ozi ndị ị hụrụ adabaghị na mmasị gị. Nke a pụtara na mgbasa ozi ị na-ahụ agaghị adaba na mmasị gị site na kuki ndị ahụ akọwapụtara.
Ọ bụrụ na echiche nke kuki ma ọ bụ ụfọdụ ụdị kuki na-amasị gị, ị nwere ike ịgbanwe ntọala ihe nchọgharị gị ka ihichapụ kuki ndị edozila na ịghara ịnakwere kuki ọhụrụ. Iji mụtakwuo maka otu esi eme nke a, gaa na internetcookies.com.
Biko rịba ama na ọ bụrụ na ihichapụ kuki ma ọ bụ ịnabataghị ha, ị gaghị enwe ike iji atụmatụ niile nke weebụsaịtị na Ọrụ na-enye.
Anyị anaghị ejikwa mkpokọta ma ọ bụ iji ozi gị iji nye mgbasa ozi dabere na mmasị ndị ọzọ. Agbanyeghị, ndị ọzọ a nwere ike ịnye gị ụzọ ịhọrọ ịghara ịnakọta ma ọ bụ jiri ozi gị mee otu a. Na mgbakwunye, ọtụtụ ihe nchọgharị weebụ na-enye ibe enyemaka metụtara ịtọ mmasị kuki. Enwere ike ịchọta ozi ndị ọzọ maka ihe nchọgharị ndị a ebe a:
Ihe nchọgharị Android
Ụfọdụ teknụzụ nsuso anyị nwere ike iji anaghị esonye na mmemme njikwa onwe maka mgbasa ozi omume ọnlaịnụ. Nke a pụtara na agaghị ahapụ gị site na isoro ntuziaka dị n'elu. Kama, pịa njikọ a ka ị nweta ozi ndị ọzọ gbasara otu esi esi pụọ na kuki tracker ahụ: Twitter. Ụfọdụ nhọrọ ị na-eme bụ ma ihe nchọgharị na ngwaọrụ akọwapụtara.
Anyị na-edobe ikike ịgbanwe amụma a ma ọ bụ usoro ya metụtara weebụsaịtị na Ọrụ n'oge ọ bụla na ikike anyị. Anyị ga-emegharị ụbọchị emelitere na ala nke ibe a mgbe anyị mere ya. Anyị nwekwara ike ịnye gị ọkwa n'ụzọ ndị ọzọ n'uche anyị, dị ka ozi kọntaktị ị wetara.
Ụdị iwu a emelitere ga-adị irè ozugbo ibipute amụma edegharịrị belụsọ ma akọwapụtaghị ya. Iji Weebụsaịtị na Ọrụ gị na-aga n'ihu ka ụbọchị dị irè nke amụma edegharịrị (ma ọ bụ omume ndị ọzọ akọwapụtara n'oge ahụ) ga-abụ nkwenye gị na mgbanwe ndị ahụ.
Ị kwenyere na ị gụọla Iwu a ma kwenye na usoro na ọnọdụ ya. Site na ịnweta na iji webụsaịtị na ọrụ, ị kwenyere na iwu a ga-ejide gị. Ọ bụrụ na ị kwenyeghị ịgbaso usoro iwu a, enyeghị gị ikike ịnweta ma ọ bụ jiri weebụsaịtị na Ọrụ.
Mgbe ndị ọbịa hapụrụ nkọwa na saịtị ahụ, anyị na-anakọta data egosiri n'ụdị nkọwa yana adreesị IP onye ọbịa na eriri onye ọrụ ihe nchọgharị iji nyere aka ịchọpụta spam.
Ọ bụrụ na ịhapụ nkwupụta, a na-edobe okwu na metadata ya ruo mgbe ebighị ebi. Nke a bụ ka anyị nwere ike mata ozugbo wee kwado nkwupụta nsonye ọ bụla kama ijide ha na kwụ n'ahịrị.
Ndị ọrụ debanyere aha na webụsaịtị anyị (ọ bụrụ na ọ bụla) na-echekwa ozi nkeonwe ha nyere na profaịlụ onye ọrụ ha. Ndị ọrụ niile nwere ike ịhụ, dezie, ma ọ bụ hichapụ ozi nkeonwe ha n'oge ọ bụla (belụsọ na ha enweghị ike ịgbanwe aha njirimara ha). Ndị nchịkwa weebụsaịtị nwekwara ike ịhụ ma dezie ozi ahụ.
Ọ bụrụ na ị nwere akaụntụ na saịtị a ma ọ bụ hapụ nkọwa, ị nwere ike ịrịọ ka ị nweta faịlụ mbupu nke data nkeonwe anyị nwere gbasara gị, gụnyere ozi ọ bụla i nyeworo anyị. Ị nwekwara ike ịrịọ ka anyị hichapụ data nkeonwe ọ bụla anyị nwere gbasara gị. Nke a anaghị agụnye data ọ bụla anyị ji ụgwọ idowe maka ebumnuche nhazi, iwu ma ọ bụ nchekwa.
Weebụsaịtị a dị n'azụ Cloudflare reverse proxy service. Site n'iji saịtị a, ị kwenyere na usoro nkwupụta nzuzo nke Cloudflare, nke nwere ike ịbụ chọtara ebe a.
Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla, nchegbu, ma ọ bụ mkpesa gbasara amụma a ma ọ bụ ojiji kuki, anyị na-agba gị ume ka ị kpọtụrụ anyị site na iji nkọwa ndị dị n'okpuru:
Emelitere ihe odide a na Jenụwarị 2, 2022